September 28, 2019 - khitalinmedia
သား ထီပေါက်ရင် ကျေင်းပြန်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးက ရင်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဗျာ
September 28, 2019 Khitalin Media 0
#လမ်းပေါ်ကပန်းကလေး ချစ်လိုက်တာ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံရင်ထီထိုးမယ် ဆိုတော့ ရိုက်ပါအန်တီ ရိုက်ပါ သားဆီမှာထီထိုးပါတဲ့သူရွေးပေးတဲ့ ၁၀စောင်တွဲယူတော့ ဖုန်းနံပါတ်ရေးတယ် လက်ရေးက ခနော်ခနဲ့ ဘယ်နှတန်းအထိကျောင်းနေဖူးသတုံးဆိုတော့ ၅တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ရတာပါ။ တို့တိုင်းပြည်က မဖူးခင်ကြွေရတဲ့ပန်းတွေ သူထီရောင်းနေတဲ့လမ်းက စာသင်ကျောင်းနဲ့ကပ်လျက် စာသင်ခန်းထဲက စာအံသံတွေ လမ်းမကကြားနေရတယ် ကလေးရယ် သူလည်း ကျောင်းနေချင်ရှာမှာပဲ အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေစာသင်ခန်းထဲမရှိပဲ လမ်းပေါ်မှာရှာဖွေစားနေရတာမြင်ရရင်လေ […]
လမ်း​ဘေးမှာ ​တောင်းစား​နေတဲ့ သူ​တွေအတွက်​ ပိုက်ဆံ​ ကူ​တောင်း​ပေး​နေတဲ့ SINON LORESCA ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တစ်​ကမ္ဘာလုံးက Catwalk King လို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ရလောက်တဲ့အထိ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် LGBT မော်ဒယ် Sinon Loresca ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အရမ်းချစ်​ပြီး သူ့ရဲ့ ဒုတိယ​မြောက်​ မိခင်​နိုင်​ငံလို့​တောင်​ ​​ပြော​လေ့ရှိသူ တစ်​ဦးပါ ။ လတ်တလောမှာတော့ Sinon က လူအချင်းချင်း […]
ငွေကြေး လဒ်ရွှင်လာအောင် ​ကြာသပ​တေး​နေ့တိုိင်းပြုလုပ်ရမည့် ယတြာ
ငွေ​ကြေး လာဘ်​ရွင်​​အောင်​ ကြာသပ​တေး​နေ့တိုိင်းပြုလုပ်​ ဤသို့ပြုလုပ်​ရ​အောင် ကြာသပ​တေး​နေ့. ည​နေ. ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်​အတွင်း စာရွတ်အဖြူ တစ်​ရွက်​​ပေါ်မှာ န အက္ခရာ​ရေးသားပါ ပြီးလျှင် န အက္ခကို ပက်​၍ ဝလုံး ​ရေးသားပါ ထိုိ နအက္ခရာ ​ရေးသားထားသည့်​​ စာရွတ်​​ပေါ်. ဝါးခြမ်းပြား […]
ဒီနည်းလေးက ယုမွန်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားပြီး တကယ်ထူးခြားလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ ၄ခေါက်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ ဆံပင် ၉၅%အကျွတ်သက်သာ မဲနက်သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ယုမွန်အရင်က အစာအိမ်ရောဂါအခြေနေဆိုးလို့ ၂နှစ်လောက် နနွင်းနေ့စဉ် ၁၀လုံးသောက်ရပါတယ် အဲ့ကထဲက ရှိသမျှ ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ ထိပ်ပါပြောင်တဲ့အထိပါ။ ဆေးနည်းပေါင်းစုံကုခဲ့ပေမဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး ထိပ်ပါပြောင်ပြီး ဆံပင်တအားကျွတ်လို့ အစခံရတဲ့အထိပါ။ ခုဒီနည်းလေးကို […]
မကြီးမငယ်နဲ့ လက်ကမြင်းပြီး လေဆာမီးနဲ့ထိုးတော့ ထောင်ကျ
အသက်(၅၄)နှစ်အရွယ်၊ Michael Bisgrove အမည်ရ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားဟာ မကြီးမငယ်နဲ့ လေယာဉ်တွေကို လေဆာမီးနဲ့ လျှောက်ထိုးလို့ ရဲက ဖမ်းဆီးတာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို Metro သတင်းမှာ ဖော်ပြထာတာဖြစ်ပြီး ApannPyay ကနေ ဘာသာပြန်လိုက်တာပါ။ Michael ဟာ သူရဲ့နေအိမ်ကနေ အခုလို လက်ဆော့ခဲ့တာပါ။ Canary […]
ပုံတစ်ပုံရွှေးချယ်ပြီး သင်လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲအတွက် အဖြေရှာလိုက်ပါ
စုန်းလောကမှာ ဒီအဂ္ဂိရတ်သင်္ကေတာတွေဟာ အမြော်အမြင်ရှိခြင်းကို ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတတွေကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာတယ်လို့ စုန်းတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီသင်္ကေတတွေက ကျပန်းဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ဘဲ စနစ်တကျ စီရင်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီသင်္ကေတတွေထဲက တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်စိတ်ဝိညာဉ်က တောင့်တနေတဲ့ အရာကို သိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်က သင်ရွေးချယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ […]
ကိုမောင်ကောင်းနဲ့မချောဘုံတို့ ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ကြပြီး အကြင်လင်မယားဘ၀ရောက်ကြပါတယ် နှစ်ဘက်မိဘကလဲ ပြည့်စုံလှတာမဟုတ်တော့ မင်္ဂလာစရိတ်လေးရဖို့တောင် နှစ်တော်တော်ကြာ စုခဲ့ရတာလေ … ဒီတော့သူများတွေလို ပျားရည်ဆမ်းခရီးတွေ၊ ဘာတွေလည်း မထွက်နိုင်ပါဘူး ကိုမောင်ကောင်းမိဘအိမ်မှာပဲ မင်္ဂလာဦးညကို လွန်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုမောင်ကောင်းရဲ့ညီလေးဖြစ်တဲ့ မောင်ရွှေအေးဟာ ကျောင်းသွားခါနီး အမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားနေရင်း … “အမေ […]